DEG-DEG: Christian Pulisic Oo Rikoodh Aan Hore Loo Arag Ka Dhigay Qaybta Hore Ee Kulanka Real Madrid Iyo Chelsea - Laacib
HomeWararka Champions LeagueDEG-DEG: Christian Pulisic Oo Rikoodh Aan Hore Loo Arag Ka Dhigay Qaybta Hore Ee Kulanka Real Madrid Iyo Chelsea
DEG-DEG: Christian Pulisic Oo Rikoodh Aan Hore Loo Arag Ka Dhigay Qaybta Hore Ee Kulanka Real Madrid Iyo Chelsea
April 27, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta 1
Xiddiga kooxda kubadda cagta Chelsea ee Christian Pulisic ayaa rikoodh cajiib ah oo aan hore loo arag ka dhigay qaybta hore ee kulanka Real Madrid iyo Chelsea oo 45kii daqiiqadood ee hore ay kusoo dhamaatay 1-1.
Chelsea ayaa samaysay laba fursadood oo degdeg ahaa oo goolal noqon karayay oo ay iska lumiyeen, laakiin Christian Pulisic ayaa saxay qaladaadka weerar ee kooxdiisa daqiiqaddii 14aad markaas oo uu goolhaye Courtois xerada ganaaxa ugu gooyey kubadda, kaddibna uu shabaqa ku hubsaday kubbad qurux badnayd.
Christian Pulisic ayaa noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee u dhashay waddanka Maraykanka ee gool ka dhaliya semi-finalka tartanka Champions League, horena uma dhicin in laacib ay isku waddan yihiin uu marxaladdan oo kael wax goolal ah ka dhaliyo.
Goolkan uu Christian Pulisic saxeexay ayaa waxa kale oo uu u ahaa midkiisii shanaad ee uu ka dhaliyo tartanka Champions League, waxaanu dhaafay DaMarcus Beasley oo hore u ahaan jiray ciyaartoyga Maraykanka ah ee ugu goolasha badan Champions League.
DaMarcus Beasley ayaa Champions League ka dhaliyey afar gool, halka Christian Pulisic uu shan marayo.
Christian Pulisic oo ay da’diisu tahay 22 jir ayaa goolkiisii ugu horreeyey ee Champions League ah waxa uu u dhaliyey Borussia Dortmund sannadkii 2017.
Chelsea ayaa sidoo kale uu taariikh cusub u dhigay Christian Pulisic goolkiisa uu caawa dhaliyey, waxaana uu noqday laacibkii ugu da’da yaraa ee abid u dhaliya gool kulan ka tirsan semi-finalka Champions League ama finalka.
Christian Pulisic ayaa jabiyey rikoodhkii Ramires oo ahaa ciyaartoyga ugu da’da yar ee Chelsea u dhaliyey gool iyadoo ay marayso semi-finalka, waxaana uu laacibka reer Brazil uu sannadkii 2012 ka dhaliyey gool Barcelona iyadoo ay da’diisu ahayd 25 jir.
Mareynkan maha kaliya passor USA ow yasta waaana u cayaaray lee